Fil d'actualités du 13/12/2019
13/12/2019 - 14:30 : TOE-KARENA:Tontosa ny marainan’ny 13 desambra 2019 teo ny famindram-pintantanana teo amin’ny Tale Jeneraly ny Tahirmbolam-panjakana teo aloha, ANDRIAMANGA Herivelo sy ny Tale Jeneraly vaovao, RANJALAHY Ihanja.
13/12/2019 - 14:00 : TOBY RATSIMANDRAVA:Notanterahina anio ny lanonana fanaovam-beloma an'ireo jeneraly misotro ronono.
13/12/2019 - 11:30 : TOE-KARENA:Tontosa ny alakamisy faha-12 desambra, tao amin’ny Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo, ny lanonana famoahana amin’ny fomba ôfisialy ny vokam-pifidianana izay natao ny alarobia faha-4 desambra sy fametrahana amin’ny fomba ôfisialy ny Birao vaovaon’ny Syndicat National des Agents des Impôts (SNAIM).
13/12/2019 - 11:00 : TRANGA:Nesorina tamin'ny toerany Atoa tale jeneralin'ny tahirim-bolam-panjakana vokatr'ilay fiaram-mpanjakana natao lohana mariazy ny 7 Desambra lasa teo.
13/12/2019 - 10:30 : MOROMBE:Ombina Ben’ny tanàna lefitra 40 mahery lasan’ny dahalo tao Bekoropoka.
13/12/2019 - 10:00 : FANKAN-KEVITRA:Mitohy hatrany ny fakan-kevitra ataon'ny fanjakana mahakasika ny fanitsiana ny Fehezandalàna mifehy ny harena ankibon'ny tany, ny Zoma faha-20 Desambra 2019 manomboka amin'ny 9 ora maraina eny amin'ny Mining Business Center Ivato no fotoana manaraka.
13/12/2019 - 09:30 : KAOMININA ISOANALA:Hapetraka any an-toerana amin'ny Taona 2020 ny Police Manakaiky Vahoaka , efa vonona ihiany koa ny toerana hananganana ny Birao hiasan'izy ireo .
13/12/2019 - 09:00 : FATAMPAHANJIRO:Ireto avy ny toerana mety ahitana fatapahan'ny herinaratra anio:Talamaty-Ambohiotrakely-Iavoloha-residence Iavoloha-Ambatomaro-Tsarahonenana-Andraisoro-Ampadrian'omby-Gendarmes fort du Chesne.manomboka amin'izao ora izao ka hatramin'ny 5 ora hariva.
Archive du 20190327
Pety Rakotoniaina Hanorim-ponenana any am-ponja ?
Naverina teny am-ponja indray i Pety Rakotoniaina rehefa avy notsaraina omaly teny Anosy.
Tolona ho an’ny tanindrazana Mbola manahy fanjanahana ny mpahay tantara
Afaka 2 andro dia hankalaza ny faha-72 taona nisian’ny “tolom-panafahana” nitranga ny 29 martsa 1947 isika izay nitakiana fahaleovantenan’ny firenena Malagasy tamin’izany fotoana.
Fiainam-pirenena Manangasanga indray ny krizy…
Maro ireo olona nanohitra ny fitondrana nifanesy, indrindra tamin`ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina. Raha ny zavatra hitan`ireo nahazo fahefana dia tretrika sy hiadana ary hilamina i Madagasikara.
Tsy atao kilalao
Solombavambahoaka, antenimieram-pirenena, depiote Zay ndray zao no mahoraka, resaka mandeha Seza maromaro no hiadivana sy hozaraina amin'izany Antoko vitsivitsy mifaninana, miezaka ny ho lany.
Kaominina Antsirabe I Mikorontana tanteraka
Miha mafy ny fitokonan’ireo mpiasan’ny kaominina Antsirabe ambonivohitra.
Firaisankinan’ny sendika eto Madagasikara Misintona lakolosy momba ny resaka karama
Tsy mipetra-potsiny akory ny firaisankinan’ny sendika eto Madagasikara na ny SSM fa miezaka ny mijery sy manara-maso akaiky ireo zava-misy eto amin’ny firenena.
« IN­­-SOCCER Inter-Institut » andiany 1 Andro faha-3 anio alarobia etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina
Raikitra ofisialy nanomboka tamin’ny alatsinainy 25 martsa 2019 teo ka tsy hifarana raha tsy amin’ny alahady 31 martsa izao ny fifaninanana baolina kitra « IN­­-SOCCER Inter-Institut » andiany 1 karakarain’ny fikambanana « Jeunes Sport Events » tarihan’ny filohany, Vania Andriamisa.
Basket 3 x 3 Anda Hidôla 2019 Nafana tokoa tao Fenoarivo Atsinanana
Tontosa teny amin’ny araben’ny fahaleovantenan’i Fenoarivo Atsinanana ny sabotsy 23 sy alahady 24 martsa 2019 ny fifaninanana basikety 3 x 3 “Anda Hidôla 2019” andiany voalohany
TRS Scooter Hanokatra ny taom-pilalaovana 2019
Hanokatra ny taom-pilalaovana 2019 eny amin’ny CCI Ivato amin’ny alahady 31 martsa 2019 izao ny Club TRS “Thunder Racing Scoot” tarihan’ny filohany Andrianjaka Jean Patrick “Njaka”.
Otrikaretina Vih/Sida Eto afovoan-tany no tena betsaka voa indrindra
0,3 % ny tahan’ireo olona mitondra ny otrikaretina Vih/sida eto amintsika raha ny nambaran’ny komitim-pirenena miady amin’ny aretina SIDA omaly na ny SE/CNLS.
Nomen’ny Fitsarana Ambony Toamasina fahafahana vonjimaika i Manantena Hajanirina Dina izay voarohirohy noho ny fakana an-keriny.
IHOSY Avotry ny polisy ilay takalon’aina sy omby 22
Takalon’aina iray sy omby miisa 22 no tafaverina amin’ny tompony tany Ihosy noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny fokonolona sy ny polisy, ny sabotsy 23 martsa lasa teo.
Olan’ny mponina eny Andrefan’i Mananjara Nitondra vahaolana ny kandida Ramboasalama
Mahatsiaro tena ho tompon’andraikitra ary manana adidy eo amin’ny fiarahamonina ny kandida laharana faha-4 atolotry ny antoko Tiko I Madagasikara ao anatin’ny boriborintany faha-4 eto Antananarivo Atoa Ramboasalama Emilien.
Minisiteran’ny fahasalamana sy ny UNICEF Hanao rodobe hiady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo
Hiara-kiasa manomboka izao ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny UNICEF hanao rodobe hiady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Banky iraisam-pirenena « Tokony handroso ara-toekarena i Madagasikara »
Fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa miaraka tamin’ny Banky iraisam-pirenena no natao omaly talata 26 martsa tetsy amin’ny minisiteran’ny fitantanam-bola Antaninarenina.
Fiaraha-miombon’antoky ny fanjakana sy ny tsy miankina Mila mitandrina ny firenena mahantra
Tany amin’ny taonjato faha-15 no nipoiran’ny teny hoe « fiaraha-miombon’antoky ny fanjakana sy ny tsy miankina (PPP na 3P)) ary tamin’ny taona 1990 tany Grande Bretagne no tena nampiasana sy nampiroborobo azy.